Super Mario mapikicha | IPhone nhau
Mumazuva achangopfuura, Nintendo akabatsira kuwedzera hype kana kuvhurwa kweSuper Mario Run kuchisvika muna Zvita 15 chete kune vese vashandisi veIOS, nekuti parizvino kuvhurwa kwemutambo uyu weApple zvinoita sekunge hakuna kurongwa, sekureva kwemusiki wayo , nekuda kwehusimbe huripo papuratifomu. Mumazuva ekupedzisira muActualidad iPhone isu takaburitsa dzakasiyana nhau dzine chekuita nechiitiko ichi (Ndinovimba haina kusvika padhuze nePokémon GO mazinga), kubva ku chiziviso chitsva kubva kuNintendo chinokurudzira kuuya kwemutambo uyu, kusvika kune zvimwe zvezvinodiwa zvemutambo uyu, izvo zvinoda kubatana kweinternet zvachose kuti unakirwe nemutambo uyu, uno yave kuwanikwa muApple Chitoro, kana paine munhu anoda kuenda kundoyedza isati yatanga.
Kubva munaZvita 15, iDownloadblog inotipa zvimwe zvisikwa zvakafuridzirwa naMario, iye akanaka kwazvo pombi pombi pamusika wevhidhiyo. Ese aya mapikicha anoenderana neese iPhone resolution uye kunyangwe iwo asingatarise seakanaka pane iyo iPad, isu tinogona zvakare kuishandisa iwo kumisikidza kumirira.
Zvakare mugadziri @jim_gresham anga ari mutariri wekugadzira zvese izvi zvigadzirwa. Pane dzimwe nguva dzakapfuura uyu mugadziri akatipawo iwo mapikicha matsva eese ari maviri mamodheru eiyo iPhone uye kukoka kwakasiyana uko Apple inotumira kuvatori venhau nguva dzese padzinosvika kuratidzwa kwechigadzirwa chitsva mune yakakosha.
Kubaya pamifananidzo kunovhura kuratidzira kwavo. Nekuti dhawunirodha chifananidzo mukugadziriswa kwepakutanga, isu tinofanirwa kuenda pasi pechiso uye tinya paVona muhukuru hwakazara. Izvi zvinogona kuitwa zvese kubva ku iPhone yedu uye kubva kuMac kwedu kana PC pasina dambudziko.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » Super Mario mifananidzo